Deadbeef: Ultralight Audio Player | Linux မှ
ကဗျာ သည် GNU / Linux အတွက်အလွန်ပေါ့ပါးသော audio player ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က, ၎င်းကို၎င်း၏နောက် version အသစ်ဖြစ်သော Lubuntu တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်.
ခြားနားချက်? Rhythmbox သည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံသောကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာထဲတွင် MiB မှတ်ဉာဏ် ၄၀ ခန့်ရှိသည်။ Deadbeef, 40 MiB ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည် Winamp နှင့်အတော်လေးဆင်တူသည်၊ သို့သော်အရေခွံများကိုအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိပေ။
mp3, ogg vorbis, flac, ape, wv, wav, m4a, mpc, cd audio (နှင့်အခြားများစွာ)
Sid, nsf နှင့်အခြား chiptune အမျိုးအစားများ
ID3v1, ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4, APEv2, xing / info tags များအတွက်ပံ့ပိုးမှု
Unicode tags များအတွက်ပံ့ပိုးမှု (utf8 နှင့် ucs2)
အက္ခရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အတူ cuesheets (.cue ဖိုင်များ) အတွက်အထောက်အပံ့ (utf8 / cp1251 / iso8859-1)
mod, s3m, xm စသည်တို့ကဲ့သို့သော module များကိုခြေရာခံသည်
gtk2 interface ကိုစိတ်ကြိုက် widgets များနှင့်အတူ
GNOME သို့မဟုတ် KDE မှီခိုမှုမရှိပါ
tray အထိ minimize လုပ်, mouse ကိုဘီးနှင့်အတူအသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်
command terminal မှပြန်ဖွင့်သည်
ogg vorbis, mp3 နှင့် aac ရှိ podcasts နှင့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့သည်
plugins များအတွက်ပံ့ပိုးမှု; ရှိပြီးသား plugins တစည်းနှင့်အတူကြွလာ
x86, x86_64 နှင့် ppc64 ဗိသုကာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်
sudo apt-get ထည့်သွင်းခြင်း deadbeef
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Deadbeef: အလွန်ပေါ့ပါးသောအသံဖွင့်စက်
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငါအမြဲတမ်းဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ Che, ငါတကယ်ကောင်းတယ်ထင်တယ်၊ ငါအခုထိဘာမှမပြောခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ငါဒီဟာလုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှန်တရားကဒီကစားသမားဟာနေရာလွဲနေလို့ဒီဘလော့ဂ်အတွက်မဟုတ်ခဲ့ရင်ငါသိမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရူး! ငါမင်းကိုပွေ့ဖက်မိတယ် မျှော်လင့်ပါတယ်သင်ပိုမိုမှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်ပါတယ်။ ငါတခြားဘက်မှာသူတို့ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်။ အာ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငါကြိုက်တယ်၊ အတင်းအဖျင်းပြောနေတာငါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ရှင်ပေါလု။
san က ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီ app ကိုကြိုးစားခဲ့သည်အခြားနေ့က Che လူ။ အလွန်ကောင်းသည်၊ အလွန်ရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းစွာရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောစိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့် Ram mb 20 ထက် ပို၍ မယူပါ။ ဥပမာအားဖြင့် rhythmbox သည်အနည်းဆုံး 50 mb အထိရှိသည်။ ဒါဟာငါ windos အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော foobar ၏ငါ့ကိုသတိပေးနေပါတယ်
အလွန်ကောင်းသော blog che
ကောင်းပြီ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားကြည့်ရအောင်။ ငါစီမံကိန်းစာမျက်နှာကနေအရင်းအမြစ်ကို download လုပ်ပါ။ ငါပြုစုပြီးပြီ။ ပရိုဂရမ်ကို Applications -> အသံနှင့်ဗွီဒီယို - Deadbeef တွင်တွေ့ရမည်။
ပြproblemနာကအဲဒါကိုကောင်းကောင်းစီမံတဲ့အခါ ... လုံးဝဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ deadbeef-main ဟုခေါ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသည် system monitor ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။ သို့သော်ဘာမျှဖြစ်မလာပါ။ အဘယ်သူမျှမပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ဘာမှ။ ငါဖယ်ထုတ်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်သည်၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်“ configure” ၏ရလဒ်ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည် (ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်၊ မည်သည့်သဘာဝအမှားအယွင်းများမှ မရှိ၍ "make" နှင့်ဆက်လက်လုပ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ရန်ကျွန်ုပ်မနှောင့်ယှက်ခဲ့ပါ။ ) ငါ့ကိုလွဲချော်စေသောအရာအချို့
stdio: ဟုတ်တယ် - Standard IO plugin
gme: ဟုတ်တယ် - GME ကိုအခြေခံထားတဲ့ chiptune ဂီတဖွင့်စက်
စကားမပြောနိုင်သည့်အရာ - DUMB စာကြည့်တိုက်ကိုအခြေခံထားတဲ့ module ကစားသမား
nullout: ဟုတ်ကဲ့ - NULL output ကို
alsa: ဟုတ်ကဲ့ - ALSA output ကို
sid: yes - libsidplay2 အပေါ်အခြေခံပြီး SID ကစားသမား
ffap: yes - မျောက်ရဲ့အသံ (APE) ဒီကုဒ်ဒါ
lastfm: မရှိ - last.fm scrobbler
mpgmad: ဟုတ်တယ် - libmad အပေါ်အခြေခံပြီး mpeg player
vorbis: မ - ogg vorbis ကစားသမား
flac: ဟုတ်တယ် - flac ကစားသမား
wavpack: မ - wavpack ကစားသမား
sndfile: ဟုတ်ကဲ့ - libsndfile အပေါ်အခြေခံပြီး PCM (wav, aiff, etc) ကစားသမား
vtx: yes - vtx ဖိုင်ဖွင့်စက် (ay8910 / 12 emulation)
adplug: ဟုတ်ကဲ့ - adplug ကစားသမား (OPL2 / OPL3 အတုယူခြင်း)
vfs_curl: မရှိ - http / ftp streaming အထောက်အပံ့
cdda: မ - cd အသံဖွင့်စက်
gtkui: မဟုတ်ဘူး - GTK သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်
hotkeys: ဟုတ်တယ် - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ hotkeys အထောက်အပံ့
ffmpeg: မဟုတ်ပါ - ffmpeg codec များ
သွေးခုန်နှုန်း: မရှိ - PulseAudio output ကို plugin ကို
အနုပညာလက်ရာများ: မ - အနုပညာ plugin ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်
supereq: ဟုတ်သည် - Naoki Shibata မှ Super EQ စာကြည့်တိုက်ကို အခြေခံ၍ Equalizer
ngawartosan: da - notification-daemon support plugin
သင်မြင်ရမည့်အတိုင်း "no" ဟုပြောသော plugins များစွာရှိသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့် installation ပြီးတာနဲ့ပရိုဂရမ်ကအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုအလင်းဖြာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။ ငါ Fedora ကိုသုံးတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ငါပြtheနာကိုဖြေရှင်းလိုက်ပြီ။ ဒါဟာအချို့မှီခိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည် S
ငါ install လုပ်မထားဘူးသောအချို့သော -velvel packages များ ကူညီဖို့အချိန်ယူသောသူတို့အားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Linux Mint9"Isadora" ကိုရပြီ။